Maxaa lagu arkaa Sanlúcar de Barrameda | Wararka Safarka
Maxaa lagu arkaa Sanlúcar de Barrameda
Lola curiel | | Espana, General, Xeebaha, Maxaa la arkaa
Sanlúcar de Barrameda, oo ku taal dhinaca hore ee Beerta Qaranka ee Doñana, Waa mid ka mid ah magaalooyinka ugu booqashada badan xeebta Cádiz. Waxay daganayd ilaa waqtiyadii hore taariikhdeeda mahadnaqana meesheeda istaraatiijiyadeed, waxaa daganaa Tartessos, waxay ahayd meeshii lagu aas aasay guriga sharafta leh ee Madiina Sidonia, mid kamid ah kuwa ugu muhiimsan Spain, waxaana loo asaasay inay tahay barta ugu muhiimsan ee dhoofinta. badeecadaha intii lagu jiray gumeysigii Mareykanka. Maanta, jidadkeedu way hayaan oo waxay ka tarjumayaan dhammaan qarniyo taariikheed.
Dhaqanka, taariikhda iyo hantida dabiiciga ah ee Sanlúcar de Barrameda ayaa ka dhigeysa meel ku habboon booqashada fasaxa. Xeebaha, tiirarka, nolosha habeenkii iyo baararka si fiican wax loo cuno, waxay leedahay dhammaan waxyaabaha lagama maarmaanka u ah si aadan caajisin. Haddii aadan aqoon waxa lagu arko iyo waxa lagu sameeyo Sanlúcar de Barrameda, ma seegi kartid qoraalkan halka aad ka heli doontid ku qor meelaha xiisaha dalxiis ee lagama maarmaanka u ah booqashadaada xaruntan Cádiz.
1 Booqo Barrio Alto
1.2 Hoolka hoyga La Merced
1.3 Basilica ee Our Lady of Charity
1.4 Iridda Rota
1.5 Marwadayada O Parish
1.6 Qasriga Madiina Sidonia
1.7 Qasriga Orleans-Bourbon
1.8 Qasriga Santiago
2 Xeebaha ugu wanaagsan Sanlúcar de Barrameda
2.1 Xeebta Bonanza
2.2 Xeebaha La Calzada iyo Las Piletas
2.3 Xeebta Jara
4 Suuqa Bonanza
5 Booqo Beerta Qaranka ee Doñana oo ku taal Sanlúcar
6 Flamenco oo ku taal Sanlúcar
6.1 Halkee baan ku arki karaa bandhigga flamenco ee Sanlúcar de Barrameda?
6.1.1 Wali Nolol Dib udhac
6.1.2 Naadiga Flamenco Puerto Lucero
6.1.3 Qolka Rociera El Rengue
7 Goobaha Sanlúcar
7.1 Goobaha khamriga qaarkood oo abaabula booqashooyinka xarumahooda
8 Halkee laga cunaa Sanlúcar de Barrameda
8.1 Makhaayada Casa Bigote
8.3 Geeska Betic
Booqo Barrio Alto
Barrio Alto de Sanlúcar waa qaybta ugu faca weyn magaalada, qarniyadii dhexe waxay uruurisay dhamaan howlaha waxaana ilaaliyay derbi. Ku lugaynta jidadkeeda waa safar dhab ah oo la soo dhaafay iyo fursad weyn oo lagu barto muhiimadda ay leedahay magaalo xeebeedka oo ah bar istiraatiiji u ah ganacsiga.
Dhismayaasha diinta, jardiinooyinka, khamriga iyo daaraha waaweyn, gees walba gees ayey leedahay sheeko. Marka xigta, waxaan ku tusi doonaa waxa joogsiga ah ee aad ku mari karto socodkaaga Bairro Alto.
Waxay ku taalaa Cuesta de Belén, oo ku xigta Palacio de Medina Sidonia, Las Covachas ama Tiendas de Sierpes waxay ahaayeen a ganacsato duug ah. Iyada oo qaab Gothic ah oo calaamadeysan, waxaa lagu amray in la dhiso dhamaadka qarnigii XNUMXaad Duke of Medina Sidonia, Enrique Pérez de Guzmán y Meneses, mid ka mid ah waddooyinka, waqtigaas, waxay isu keentay qayb weyn oo ka mid ah dhaqdhaqaaqa ganacsiga Sanlúcar. Dhismuhu wuxuu soo jiitaa dareenka galabkiisa ballaadhan ee fallaadhihiisa iyo frisze qurux badan oo lagu qurxiyo meelaha laga helo dawacooyinka
Hoolka hoyga La Merced
Waxaa la dhisay qarnigii XNUMXaad iyo waxaa loo adeegsaday sidii guri keniis ah, markii dambena, sida hermitage. Sida inta badan dhismayaasha taariikhiga ah ee magaalada iyo taallooyinka, Hoolka weyn ee La Merced sidoo kale waa Waxaa loo dhisay mahadcelin dartii guriga sharafta leh ee Madiina Sidonia.
80-yadii, kaniisaddii hore waxay ku jirtay xaalad horumarsan. Marka, XXI Duchess ee Medina Sidonia waxay go'aansatay inay ku deeqdo booska Golaha Magaalada Sanlúcar iyo hadda waxay u shaqeysaa hool hoosaad degmo iyo xaruntii Ergada Dhaqanka ee Golaha Magaalada iyo Sanlúcar International Music Festival.
Basilica ee Our Lady of Charity
Basilica-ka Lady of Charity waxaa amar ku bixiyay in la dhiso VII Duke-ka Medina Sidonia. Shaqadu waxay socotay laga bilaabo 1609 ilaa 1613. Macbadka waxaa xukumayay wadaaddo si toos ah loogu magacaabay aqalka sharafta leh.
Gudiga waxaa loo wakiishay Alonso de Vandelvira, oo ah nashqadeeyaha sare ee Casa de Medina Sidonia, oo ku siiyay macbadka qaab muuqaal cad ah. Dhismaha kaniisaddu waa mid miyir leh oo iftiiminaya munaaradda dawanka qurxoon ee banaanka taaj u dhigta. Gudaha, qubbad ku dhow guri ayaa u oggolaanaya iftiinka inuu dhex maro god, oo ku yaal xagga sare, iftiiminaya meesha allabariga weyn.
Albaabka Rota waxay ka mid ahayd meelaha laga soo galo magaalada qadiimiga ah, oo ku hareereysan Guzmán el Bueno. Waxay ku leedahay magaceeda Halkaa marka ay marayso darbiga, dariiqa isku xidha Sanlúcar de Barrameda iyo Rota, tuulo deris la ah. Sanlúcar waxaa looyaqaanaa "Arquillo" dhismihiisiina wuxuu soo bilaabmay qarnigii XNUMXaad ilaa XNUMXaad.
Marwadayada O Parish
Kiniisadda Marwadayada ee O Waa Kaniisadda Weyn ee Sanlúcar de Barrameda. Dhismihiisu wuxuu bilaabmay sanadkii 1603 waxaana loo sameeyay mahadcelinta Duchess-kii Koowaad ee Medinaceli, Isabel de la Cerda y Guzmán, oo sidoo kale ahayd ayeeyo Guzmán el Bueno.
Qaabka Mudejar iyo warshad afar geesle ah, macbudku wuxuu u taagan yahay dhagaxiisa dhagaxa ciida ah, oo ay ku taajireen jubbadaha sharafta leh ee guryaha sharafta leh ee Guzmán iyo de la Cerda. Gudaha, saqafka sare ee Mudejar ayaa indhaha oo dhan wada qabanaya.
Qasriga Madiina Sidonia
Qasriga Madaxdii Madiina Sidonia Waxaa la dhisay qarnigii XNUMXaad qarnigii XNUMXaad ee Muslimiinta. Qaab dhismeedyo kala duwan ayaa ku wada nool qasriga, oo ku badan qaabka Mudejar, ee dhismihii hore, iyo Renaissance. Gudaha waxaa ka buuxa shaqooyin farshaxan ah oo laga helay guriga sharafta leh. Rinjiyeynta farshaxanada dhererka Zurbarán iyo Francisco de Goya ayaa taagan. Beerta ayaa leh keymo dhan 5000 m2 waana mid kale oo ka mid ah jowharadaha waaweyn ee dhismaha.
Maanta, qasrigu waa xarunta dhexe ee ururka aan macaash doonka ahayn ee Fundación Casa Medina Sidonia iyo Waxay ku taal mid ka mid ah hudheellada ugu matala uguna saxsan Sanlúcar de Barrameda.
Qasriga waxaa la dhisay qarnigii XNUMX, sida xagaaga ee deggmooyinka Montpensier, Antonio de Orleans iyo María Luisa Fernanda de Borbón. Maanta waa mid ka mid ah dhismooyinka ugu caansan magaalada, oo u shaqeynaya sidii Golaha Magaalada ee Sanlúcar de Barrameda.
Qaab dhismeedkeeda iyo jardiinooyinkeeda quruxda badan ayaa ka dhiga shaqo farshaxan gaar ah, Habka faoade-ka cusub ee 'Neo-Mudejar' wuxuu ka soo horjeedaa midnimadii Talyaaniga ee ka jirtay meelaha qaarkood ee gudaha. Noocyada sida Rococo, Masaarida ama Shiinaha, ayaa jooga qolalka kale ee qasriga.
Waxaa lagu dhisay qarnigii XNUMXaad hoostiisa masruufka Casa de Medina Sidonia, The Castillo De Santiago wuxuu u taagan yahay qaabkiisii ​​Gothic ee soo daahay iyo keydinta, nuqul ka mid ah Torre de Guzmán el Bueno oo ka socda Qalcadda Tarifa. Dhismuhu wuxuu u adeegay sidii qalcad xoog leh waxaana booqday shaqsiyaad muhiim ah oo joojiyay Sanlúcar sababtoo ah meelaheeda mudnaanta leh, sida Colón, Fernando de Magallanes iyo xitaa Isabel la Católica lafteeda.
The Castillo De Santiago shaki la'aan waa mid ka mid ah meelahaas ay tahay inaad ku aragto magaalada. Xilligan guryaha gudaha Matxafka dharka iyo Matxafka Hubka, marin u helka labadaba waxaa lagu darayaa tigidhka ogolaanshaha guud ee qalcadda. Intaas waxaa sii dheer, waxay leedahay beero badan iyo qolal loo fidiyay inay martigeliyaan dhammaan noocyada dabaaldegyada.
Xeebaha ugu wanaagsan Sanlúcar de Barrameda
Sanlúcar waa magaalo bixisa qorshayaal iyo fursado aad u tiro badan inkasta oo ay tahay dhul xeebeed, waxay mudan tahay in la booqdo xitaa xilliga qaboobaha. Si kastaba ha noqotee, Haddii aad tagto magaalada xagaaga oo aad raadineyso inaad ka baxsato kuleylka koonfureed, waxaad aadi kartaa xeebaha ugu fiican Sanlúcar de Barrameda, ku raaxee qorraxda oo ku qabow qubays wanaagsan.
Waxay ku taal afaafka hore ee Guadalquivir, xeebtaan ayaa caan ku ah dadka deegaanka, waxaana la yaab leh, in yar oo ka mid ah dadka ku nool dibedda. Waa xeeb aad u sax ah, xasilloon, oo leh ciid cad iyo biyo aad u deggan. Xeebta agteeda, waxaad ku arkaysaa doonyo yaryar, oo ay leeyihiin kalluumeysato maxalli ah. In kasta oo aysan ahayn xeebta ugu wanaagsan ee lagu maydho, haddana waxay ku habboon tahay socodka, cabbitaanka baarka xeebta iyo ku raaxeysiga neecowda badda.
Xeebaha La Calzada iyo Las Piletas
Labada xeebood, ee isdulsaaran midba midka kale, waxaa laga yaabaa inay yihiin kuwa ugu caansan Sanlúcar. Tartanada caanka ah ee faraska ayaa lagu qabtaa halkan Ogosto, mid ka mid ah dhaqamada ugu muhiimsan ee magaalada.
Heerka shaqo ee xeebahan badiyaa waa sarreeyaa, laakiin waa mudan tahay in loo tago iyaga, gaar ahaan haddii aad rabto inaad ka faa'iideysato dhammaan noocyada qalabka iyo adeegyada, intaad ku raaxeysaneyso muuqaalka.
Haddii aad raadineyso inaad ka fogaato buuqa iyo buuqa magaalada oo aad maalinta ku qaadato jawi aad u badan oo aan la faafin, Playa de la Jara ayaa ku soo jiidan doonta. Waxay ku taal qiyaastii 15 daqiiqo bartamaha Sanlúcar de Barrameda, xeebtani waxay ku habboon tahay in lagu raaxeysto qubeys wanaagsan, laga gooyo oo lala xiriiro dabeecadda.
In kasta oo ay ka maqan tahay adeegyo iyo tas-hiilaadyo badan, haddana quruxda muuqaalku way ka kooban tahay. Badanaa ma badna dad badan, markaa xasilloonida ayaa la damaanad qaadayaa, iyo daawashada qorrax dhaca oo ku dul nasanaysa ciidda ayaa ah muusig dhab ah. Dabcan, haddii aad tagto xeebtaan waxaan kugula talinayaa inaad xirato booties, waxaa jira dhagaxyo iyo kabaha noocan oo kale ah ayaa ka caawin doona musqushaada inaysan kharribin.
Plaza del Cabildo waa wadnaha Sanlúcar de Barrameda, Baararka, dabaqyada iyo makhaayadaha ayaa laga qaybiyey hareeraheeda qayb badan oo jawiguna waa urursan tahay. Isha dhexe iyo geedaha waaweyn ee timirta ah ee ku kora gudaha fagaaraha, waxay ka dhigayaan meel u gaar ah oo, shaki la'aan, mid ka mid ah astaanta aagga.
Waxaa ka buuxa nolosha iyo Haddii aad rabto inaad ogaato dhaqanka tubas, meeshani waa tan lagu sameeyo. Kuwa leh ilig macaan ayaa sidoo kale halkaan ka heli doona qorshahooda saxda ah, sababtoo ah dadka deegaanka ee ku hareeraysan fagaaraha waxaa ku yaal qaar ka mid ah meelaha ugu fiican jalaatada Sanlúcar de Barrameda.
Sida magaalooyin badan oo xeebeed, Kalluumeysiga waa mid ka mid ah howlaha ugu da'da weyn uguna habboon Sanlucar de Barrameda. Ogaanshaha ka ganacsiga kalluunka waa hab aad u wanaagsan oo lagu qooyo dhaqanka Sanlucan. Taas maahan wax ka fiican inaad tagto Suuqa Bonanza.
Waxay ku taal agagaarka dekedda, suuqa kalluunku waa xuddunta ganacsiga kalluumeysiga magaalada. Waxay u qaybsan tahay laba qaybood, mid u heellan iibinta kalluun-boorsada-seine iyo qayb kale oo lagu tunto. Xaraashka kalluunka waa, shaki la'aan, mid ka mid ah bandhigyada ugu saxsan ee aad markhaati ka noqon karto inta lagu jiro booqashadaada Sanlúcar. Waxaa ka soo qayb gala kalluumeysatada iyo ganacsiyada maxalliga ah ee ku tartamaya wax soo saarka cusub ee ugu wanaagsan. Haddii aad rabto inaad ogaato nuxurka magaalada, sidoo kale waad ogaan kartaa u soo dhawaada dekedda si aad u aragto kalluunka laga dejinayo.
Booqo Beerta Qaranka ee Doñana oo ku taal Sanlúcar
Beerta Qaranka ee Doñana Waa mid ka mid ah meelaha ugu muhiimsan ee laga ilaaliyo Spain. Kaydku wuxuu ka kooban yahay noocyo badan oo deegaanka deegaanka ah oo ku siiya kala duwanaansho iyo muuqaal hodan ku ah Yurub. Sanlúcar de Barrameda wuxuu nasiib u leeyahay inuu ku yaal meel u dhow beerta nasashada iyo Booqashada Doñana waxaa laga abaabulaa magaalada. Haddii aad raadineyso inaad aragto wax ka weyn taalladaha oo aad jeclaan lahayd inaad ku raaxeysato dabeecadda ugu caansan, ballansashada mid ka mid ah dalxiisyadan waa fikrad weyn.
Beerta waxaa lagu tagi karaa doon, iyada oo loo marayo Guadalquivir Iyo, inkasta oo socodka webiga uu horey u yahay wax la yaab leh, haddii aad rabto inaad ogaato dhammaan nidaamyada deegaanka ee Doñana, waxaad sidoo kale kireysan kartaa adeeg dhan-dhul ah, oo badanaa ku jira hage takhasus leh, oo aad la booqan karto gees kasta hanti dabiici ah.
Doomaha waxay ka baxaan xeebta Bajo de Guía waxayna ka gudbaan Guadalquivir ilaa xeebta keydka. Markaa halkaa, se ku sii wad gaariga dhammaan dhulkiisa oo waxaan ku bilaabaynaa safarka meelaha ugu caansan ee Doñana: xeebta, ciidaha cad cad, keydinta, meeraha ... Wadadu waxay ku egtahay «La Plancha», magaalo duug ah oo ay degenaayeen dadkii deggenaa beerta.
Doonta ayaa kugu celin doonta Sanlúcar, si aad ugu sii wadato baashaalka magaalada. Marka hadda waad ogtahay, haddii aadan garanayn waxa lagu arko Sanlúcar de Barrameda, maskaxda ku hay in hal ikhtiyaar ay tahay in la baaro hareeraheeda iyo Waxaad ku sameyn kartaa dalxiiskan hal maalin gudaheed.
Flamenco oo ku taal Sanlúcar
Flamenco waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu matalaya dhaqanka ee Andalusia. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira magaalooyin jacaylka noocyadan muusigga ah lagu afuufay gees walba, Sanlúcar de Barrameda waa mid ka mid ah magaalooyinkaas.
Si aad ugu raaxaysato heesaha iyo qoob-ka-ciyaarka, Sanlúcar gudaheeda waxaa ku takhasusay gudbinta iyo soo bandhigida farshaxanka dhulalkaas. Haddii aad rabto inaad ku dhowaato dhaqanka Sanlúcar, kama bixi kartid adiga oo aan booqan mid ka mid ah peñas-ka iyo weli noolaha bixiya barnaamijyada noocan ah (iyo kan aan ku siinayo macluumaad dheeraad ah xagga hoose).
Halkee baan ku arki karaa bandhigga flamenco ee Sanlúcar de Barrameda?
Wali Nolol Dib udhac
Waxay ku taalaa Calle San Miguel, kaliya socod seddex daqiiqo ah ayaa ka socda Orleans Palace, tan isku dhafka tavern dhaqameedka iyo tablao waxay siinaysaa dalxiisayaasha suurtagalnimada ku raaxeysiga bandhig flamenco gaar ah, oo ay fuliso fanaaniin xirfad leh, iyadoo dhadhaminaysa suxuunta caadiga ah ee aagga.
Naadiga Flamenco Puerto Lucero
Qiyaastii 300 oo mitir Castillo De Santiago, Calle de la Zorra, waa Peña Flamenca Puerto Lucero. Ururkan dhaqan ee aan macaash doonka ahayn qabanqaabiyaa bandhigyada flamenco. Isu keenida fanaaniinta aaga kana caawiya dhalinyarada, peña wuxuu ku dadaalayaa inuu muujiyo in flamenco ay tahay dhaxal ku nool Sanlúcar waxayna isku dayaan inay jacaylka farshaxankan u gudbiyaan qof kasta oo ku yimaada tabalkooda.
Qolka Rociera El Rengue
Tapas, cabitaano iyo muusig toos ah, Sala Rociera El Rengue waa meesha ugu fiican ee loogu talagalay kuwa doonaya inay ku raaxaystaan ​​Sanlúcar laga bilaabo Barrameda ilaa laxanka rumbas iyo sevillanas. Waxay ku taal calle de las Cruces, meeshu waxay leedahay jawi deggan oo kuu oggolaanaysa inaad ugu dhowaato flamenco si dhab ah oo ka duwan.
Soosaarka khamrigu waa, taariikh ahaan, waxqabad dhaqaale oo muhiim u ah Sanlúcar de Barrameda. In kasta oo ay jiraan khamri ka iibiya khamriga noocyo kala duwan oo asal ah (Jerez, Vinagre iyo Brandy de Jerez), Manzanilla waa tii dhaqan ahaan ku xirnayd dhaqanka Sanlúcar.
Es mid ka mid ah khamriga ugu qaalisan adduunka, Waxay leedahay dabeecad u gaar ah waana dhulka ay ku dhalatay ee ku manaysta nuucaan gaar ah. Waa ku habboon in lala socdo aperitif, Waxaa loo cunaa qabow (inta udhaxeysa 5º iyo 7º C) iyo lammaanayaal si aad ufiican u leh dhamaan cuntooyinka ka yimaada bada waxaana nasiib wanaag, Sanlúcar waxay bixisaa alaab ceyriin ah oo aad ufiican, alaab cusub oo tayo sare leh.
Waan hubaa inaan horeyba kuugu qanciyey inaad tijaabiso hal galaas oo ah Chamomile, laakiin… Ma jeclaan laheyd inaad ogaato sida loo helo? Dalxiiska khamrigu waa ikhtiyaar weyn oo loogu talagalay kuwa jecel khamriga ee u yimaada inay maalmo ku qaataan magaalada. Waxaa jira khamriyeyaal abaabula booqashooyinka dalxiisayaasha oo ay ku sharaxi doonaan geedi socodka wax soo saarka oo dhan cabitaankii noqday astaanta Sanlúcar.
Goobaha khamriga qaarkood oo abaabula booqashooyinka xarumahooda
Waxaa la aasaasay 1972, Bodegas Hidalgo La Gitana waa ganacsi dhaqameed laga soo gudbiyay aabaha ilaa wiilkiisa. Waxay ku leeyihiin magacooda xiddigooda wax soo saar: "La Gitana" Manzanilla, oo ka mid ah kuwa ugu caansan Sanlúcar de Barrameda.
Abaabul dhadhamin maalinle ah iyo noocyo kala duwan oo safarro hagitaan ah. Boos celin ayaa laga sameyn karaa degelkooda Qiimuhuna waa macquul.
Ka hadalka Manzanilla «La Cigarrera» waxay la mid tahay dhaqanka. Asalka goobta khamriga waxaa loo aaneeyaa ganacsade reer Catalan ah oo ku dhamaaday joogitaanka Sanlúcar, Mr. Joseph Colóm Darbó, oo isagu sanadkii 1758 aasaasay qol lagu keydiyo khamriga oo ku yaal xaafada Callejón del Truco.
Maanta, inka badan 200 sano kadib, ganacsigu wuxuu u koray inuu sameeyo «La Cigarrera» mid ka mid ah kuwa ugu ganacsiga badan Manzanillas. Si loo soo dhoweeyo dhaqanka La Manzanilla ee dadweynaha guud loona gudbiyo jacaylka dhaqanka iyo taariikhda Sanlucan, milkiileyaasha khamriga ayaa go'aansaday inay u furaan dadweynaha, iyagoo bixinaya Booqashooyinka hagida ee xarumaha oo ay ku jiraan a dhadhamiya ee khamrigooda ugu fiican. Boos celin ayaa laga sameyn karaa xiriirka ay ku bixiyaan websaydhkooda.
Waxaa laga furay 1821, Bodegas Barbadillo kaliya maahan inuu ku bixiyo booqasho hagitaan ah xarumaha iyo dhadhaminta, laakiin sidoo kale Waxay leeyihiin matxaf loogu talagalay taariikhda iyo soosaarka Manzanilla ee Sanlúcar. Inta udhaxeysa foostooyinka, waxay kuu gudbin doonaan jaceylka waxa ay ku qeexeen "hab nololeed" waxayna kugu soo dhaweynayaan dhaqanka aagga si gaar ah.
La Manzanilla Solear waa khamriga ugu fiican ee loo yaqaan khamriga waxayna caan ku noqotay labiska iyo nooleynta qeyb weyn oo ka mid ah carwooyinka dhaqanka ee Andalus.
Halkee laga cunaa Sanlúcar de Barrameda
Gastronomy waa mid ka mid ah meelaha ugu wanaagsan ee loo dalxiis tago aagga. Sanlúcar wuxuu caan ku noqday bixinta waxyaalaha ugu fiican badeecadaha badda prawn ay wax soo saarka xiddig. Dhadhanka kalluunka, raaxaysiga ku raaxaysiga shiil si wanaagsan loo sameeyey iyo cunnada badda oo lagu daray khamri, ayaa Sanlúcar gastronomy ka dhigaya wakiil ka socda dhaqanka cunnada ee Cádiz.
Si aadan uga tagin adigoon ku raaxaysan cunnada wanaagsan ee Sanlúcar de Barrameda, waxaan hoos ku soo bandhigayaa qaar ka mid ah baararka ugu fiican iyo makhaayadaha magaalada.
Makhaayada Casa Bigote
Waxay ku taal Bajo de Guía, Makhaayadani waxay furan tahay ilaa 1951 waana mid ka mid ah meelaha astaanta u ah dhaqanka iyo wanaagga. Bixitaankeeda gastronomic wuxuu ku saleysan yahay badeecooyinka maxalliga ah, cuntada badda iyo kalluunka darayga ah ee ugu tayada sarreeya, si fiican loo kariyey iyo deegaan u gaar ah.
Maxaa ku bilaabmay dukaanka raashinka, maanta waa mid ka mid ah baararka tixraaca ee Sanlúcar de Barrameda. Omelettes-ka quruxda badan ee loo diyaariyey jikadooda waxay qabsadeen caloosha dadka maxalliga ah iyo shisheeyaha. Ixtiraamka sheyga iyo cuntada caadiga ah ee aaggu waa tiirarka adkeeya dalabkiisa gastronomic ee wanaagsan iyo guushiisa.
Haddii aad ka mid tahay kuwa jecel asalka, meeshan ayaa ku soo jiidan doonta. Marka laga soo tago buuqa iyo mashquulka xarunta, maqaayaddan ayaa ah mida caadiga ah ee dadka deegaanka ay aadaan. Fikradayda, Rincón Bético waxay bixisaa kalluunka ugu fiican ee la shiilay ee magaalada ku jira, mid cusub, mid jajab ah iyo qiimo aad u wanaagsan. Dhammaan kalluunka la shiilay ee la shiilay waa saxanka xiddigtiisa, oo ay adag tahay in laga helo goobo kale.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » General » Maxaa lagu arkaa Sanlúcar de Barrameda
Macbadka Luxor ee Masar
Jasiiradaha Marquesas, janno